Kọwaa akụkọ ihe mere eme na YouTube
Site na ndabara, ọrụ ntanetị vidio na YouTube na-echekwa vidiyo ị na-ekiri ma tinye arịrịọ, ma ọ bụrụ na ịbanye na akaụntụ gị. Ụfọdụ ndị ọrụ adịghị mkpa ọrụ a ma ọ bụ na ha chọrọ ikpochapụ ndepụta ihe ndekọ ndị ahụ. N'isiokwu a, anyị ga-atụle n'ụzọ zuru ezu otu esi eme site na kọmputa na site na ngwa ngwa.
Tinye ndepụta okwu na vidiyo nke onye ọzọ na YouTube
YouTube na-enye ndị ọrụ ya ọ bụghị nanị ilele ma na-agbakwunye vidiyo, mana ha na-ekepụta ederede maka onwe ha ma ọ bụ vidiyo nke onye ọzọ. O nwere ike ịbụ dị ka ihe dị mfe n'asụsụ ha ma ọ bụ n'asụsụ mba ọzọ. Usoro nke ihe okike ha abụghị ihe mgbagwoju anya, ha nile dabere na ọnụọgụgụ ederede na ogologo oge nke ihe onwunwe.
Esi akuko akuko YouTube
Ndị ọrụ Google anaghị enwe ike ịdebe ọdịnaya niile nke ndị ọrụ bipụtara. N'ihi nke a, mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịchọta vidiyo na-emebi iwu nke ọrụ ma ọ bụ iwu obodo gị. N'ọnọdụ ndị dị otú a, a na-atụ aro ka ị zigara mkpesa mkpesa ka e wee mara ọkwa nlezianya maka ịghara ime ihe kwekọrọ na iwu ma tinye ikikere kwesịrị ekwesị maka onye ọrụ ahụ.
Nhọrọ nhọrọ YouTube
E nwere isiokwu pụrụ iche nke abanyela na nchọta na YouTube, ị ga-enweta nsonaazụ ziri ezi nke nyocha gị. Ya mere ị nwere ike ịchọ vidiyo nke ụfọdụ àgwà, oge na ihe ndị ọzọ. Ịmara mkpụrụokwu ndị a, ị nwere ike ịhụ vidiyo ahụ achọrọ. Ka anyị lee anya na nke a niile.
Fanye vidiyo site na YouTube gaa na saịtị ahụ
YouTube na-enye ọrụ dị ukwuu na saịtị niile, na-enye ikike ịdebe vidiyo ha na saịtị ndị ọzọ. N'ezie, n'ụzọ dị otú a, a na-egbu mmadụ abụọ n'otu oge - YouTube video hosting site na-agabiga oke ókè, ebe saịtị ahụ nwere ikike ịkwusaa vidio n'enweghị isi ihe na-enweghị isi na-ebudata sava ya.
Ọ bụrụ na ihiere abanye na oge na-adịghị mma mgbe ị debanyere akaụntụ Google gị ma ugbu a ị pụghị ile ụfọdụ vidiyo na YouTube n'ihi nke a, mgbe ahụ ọ dị mfe idozi. Onye ọrụ a chọrọ naanị ịgbanwe ụfọdụ data na ntọala ozi nkeonwe. Ka anyị lebakwuo anya n'otú ị ga-esi agbanwe ụbọchị ịmụrụ gị na YouTube.
Anyị na-agbanwe obodo na YouTube
Ndagharị zuru ezu nke saịtị YouTube na ngwa ngwa ya nwere ntọala na-enye gị ohere ịgbanwe obodo ahụ. Nhọrọ ya na-adabere na nhọrọ nke aro na ngosipụta vidiyo na ọnọdụ. Youtube enweghị ike iji aka gị kpebie ọnọdụ gị, ya mere iji gosipụta obere vidiyo na mba gị, ị ghaghị iji aka mee mgbanwe ụfọdụ na ntọala.
Gbanwee ọwa URL gaa na YouTube
Ihe ngosi vidio a maara nke ọma na-enye ụfọdụ ndị ọrụ aka ịgbanwe URL nke ọwa ha. Nke a bụ ohere dị ukwuu iji mee ka akaụntụ gị bụrụ ihe na-echefu echefu, ka ndị na-ekiri wee nwee ike ịbanye adreesị ha ngwa ngwa. Isiokwu ahụ ga-akọwa otú ị ga-esi gbanwee adreesị nke ọwa na YouTube na ihe ndị a chọrọ iji zụọ ya.
Ime ederede n'atụ egwu na YouTube
Nkwupụta na YouTube bụ ụzọ bụ isi nke mmekọrịta dị n'etiti onye na-ede vidio na onye na-ekiri ya. Mana mgbe ufodu, obuna na oke akwukwo onwe ya adighi aka ya, nkwurita uka di iche iche bu ihe ndi ozo. N'okpuru mgbidi niile nke ederede, ozi gị nwere ike ịla n'iyi. Otu esi eme nke mere na a hụrụ ya ozugbo na a ga-enwe isiokwu a.
Ikiri video ehichapụ na YouTube
Nchịkọta YouTube na-enye ndị ọrụ ya ikike zuru oke na vidiyo ha ha debere na ụlọ ọrụ a. Ya mere, ị nwere ike ịhụ na ehichapụla, ehichapụ, ma ọ bụ na onye na-ede akwụkwọ agaghị adị. Ma, e nwere ụzọ iji lee ihe ndekọ ndị dị otú ahụ anya. Ikiri vidio dị na YouTube Ọtụtụ ndị na-eche na ọ bụrụ na a na-egbochi ma ọ bụ ehichapụ vidiyo, ị gaghị eche ya ọzọ.
Akara aha maka otu YouTube
Ọtụtụ ebe a na-ewu ewu na YouTube nwere akara nke aka ha - obere akara ngosi n'akụkụ aka nri nke vidiyo. A na-eji nke a eme ma inye mmadụ n'otu n'otu na azụmahịa, na dịka ụdị mbinye aka dịka ihe nchedo ọdịnaya. Taa, anyị chọrọ ịgwa gị otu ị ga - esi mepụta logo na otu esi bulite ya na YouTube.
Tinye koodu iji jikọọ akaụntụ YouTube na TV
Iji njikọ Wi-Fi, ndị ọrụ nwere ike jikọọ ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ kọmputa na TV site na itinye koodu kapịrị ọnụ. Ọ na-edekọ ma dekọọ akaụntụ YouTube gị na TV. N'isiokwu a, anyị ga-eleba usoro njikọ anya n'ụzọ zuru ezu, gosikwa otu esi eji ọtụtụ profaịlụ n'otu oge.
Ntọala ma na-agba ọsọ na YouTube
Ugbu a, iyi ndị na - ekiri bụ ọrụ a ma ama n'etiti ndị na - Intaneti. Egwuregwu egwu, egwu, egosi na ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite mgbasa ozi gị, ịkwesịrị inwe naanị otu usoro ihe omume ma soro ntuziaka ụfọdụ. N'ihi ya, ịnwere ike ịmepụta mgbasa ozi na YouTube.
Donat guzobere na YouTube
Enwere ike ịme uru site na iyi na YouTube n'ihi onyinye sitere na ndị ọzọ, a na-akpọkwa onyinye. Ihe kachasị mkpa bụ n'eziokwu na onye ọrụ ahụ na-esote njikọ ahụ, na-eziga gị ego ụfọdụ, mgbe ahụ, ngosi ga-apụta na iyi, nke ndị ọzọ ga-ahụ. A na-ejikọ Donat na iyi ahụ. A ga-eme nke a n'ọtụtụ nzọụkwụ, na-eji otu usoro na saịtị nke e kere kpọmkwem maka ijikwa onyinye.
Nbudata YouTube na Sony TVs
Ọtụtụ ndị ọrụ mgbe imelite ngwa ngwa na Sony's Smart TV na-eche ozi gbasara mkpa iji melite ngwa YouTube. Taa, anyị chọrọ igosi ụzọ nke ọrụ a. Imelite ngwa YouTube .. Ihe mbụ ị ga - ahụ bụ ihe ndị na-esonụ - Sony "TV TV" nke Sony na-achịkwa Vewd (nke bụ TV Opera n'oge gara aga) ma ọ bụ gam akporo telivishọn (nsụgharị mobile OS nke kachasị mma maka ngwaọrụ ndị dị otú ahụ).
Mepee Ndebanye aha YouTube
Ọ bụrụ na ịchọrọ ndị ọrụ na-aga na ndepụta gị iji hụ ozi gbasara ndebanye aha gị, ịkwesịrị ịgbanwe ụfọdụ ntọala. Nke a nwere ike ime ma na ngwaọrụ mkpanaka, site na ngwa YouTube, na kọmputa. Ka anyị lee ụzọ abụọ. Mepee ndebanye aha YouTube na kọmputa gị Iji dezie na kọmputa gị, site na ebe nrụọrụ weebụ YouTube, ịkwesịrị: Banye na akaụntụ nkeonwe gị, wee pịa akara ngosi ya n'elu aka nri ma gaa "YouTube Ntọala" site na ịpị nkedo.
Jiri egwu na YouTube
Taa, YouTube abughi nani ikpo okwu kachasị ama maka ikiri vidiyo site n'aka ndi ozo, kamakwa ike nke ike ihe omimi vidiyo ma bulite na saịtị. Ma olee ụdị egwu ị ga-etinye n'ime vidiyo gị ka ọ ghara igbochi ma ọ bụ wepụ ego? N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ebe ị ga-achọta egwu egwu na n'efu maka YouTube.
Gaa na YouTube na Twitch n'otu oge ahụ
Ụfọdụ ndị na-egwu mmiri na-ahọrọ iji ọrụ dị iche iche n'otu oge rụọ ọrụ mgbasa ozi. N'ọtụtụ ọnọdụ, ụdị ụyọkọ ahụ bụ YouTube na Twitch. N'ezie, ị nwere ike ịmepụta mgbasa ozi n'otu oge na nhazi abụọ a naanị site na ịme ihe abụọ dị iche iche, ma nke a bụ ihe na-ezighị ezi ma ọ bụ na-enweghị isi.
Analogs nke YouTube video hosting
Na Ịntanetị, ọtụtụ saịtị dị ka YouTube. Ha nile dị iche na interface na arụmọrụ, Otú ọ dị, ha nwere ihe yiri ya. Ụfọdụ n'ime ọrụ ndị ahụ ka e kere tupu ọdịdị nke YouTube, ebe ndị ọzọ nwara idetuo ya ma nweta nkwanye ùgwù, dịka ọmụmaatụ, n'ógbè ha. N'isiokwu a, anyị ga-ele anya ọtụtụ analog video hosting YouTube.
Ịmepụta ọwa na ngwa ngwa YouTube
Ọ bụghị ndị ọrụ niile nwere ike ịnweta ụdị zuru ezu nke saịtị YouTube, ọtụtụ ndị na-ahọrọ iji ngwa ngwa. Ọ bụ ezie na arụ ọrụ dị na ya dịtụ iche na mbipute ahụ na komputa, ma a ka nwere ihe ụfọdụ dị mkpa ebe a. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu maka ịmepụta ọwa na ngwa ngwa YouTube ma lebakwuo anya na nke ọ bụla.